Ismaandhaafka Shariifka iyo Col. Abdullahi
Buluugleey Jun 27,2005
Shariif Xasan oo ah nin wadaad ah, xirfada noloshiisana ku soo saaratay ganacsi ayaa loo doortay inuu noqdo guddomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliya oo ay IGAD u soo xushay. Shariifku ma laha tayo iyo aqoon siyaasadeed ee uu ku mudan karo xil weyn oo uu afhayeen ugu noqon karo gole ka turjumaya inuu wakiil ka yahay ummadda Soomaaliyeed. Magacaabistiisana waxaa ka dambeeyey ku talagal jagadaas loogu hibeeyey hab ku dhisan wax ku qeybsiga qabiil. Jagooyinka dowlada ee loogu talagalay in lagu qeybsado hab qabiil waa waxa dalka Soomaalida u keenay cadaalad xumada burburisay qaranimada Soomaaliya.
Shariif Xasan wuxuu aaminay in uu gaashaan ka dhigto dagaaloogayaashii dadkooda ku gumaaday magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay ujeedadoodu tahay sidii ay hanti uga heli lahayeen maamulkaan lagu soo guntey dalka Kenya. Heshiiska lagu soo uruuriyey dagaaloogayaasha ee loogu abuuray maamul dib u heshiisiineed ayaa ahaa mid ummadda Soomaalida lagu qiyaamayey looguna daneynayey iney xoolo ku helaan dagaalogayaasha iyo kuwa ka turjumaya danaha shisheeye.
Dhanka kale, Col. Cabdulaahi Yusuf oo ah nin mabda’iisu yahay qabiil, ayaa noloshiisa inta badan ku soo qaatay jabhadnimo uu ku guuldareystay. Welina taariikhda kuma soo aroorin mar qura oo uu ka arimiyay danta guud ee Shacabka Soomaaliyeed. Col. Cabdulaahi wuxuu horjooge u noqday maamulka IGAD soo dhoob-dhoobtay ee lagu soo unkay dalka Kenya. Magacaabista madaxweyne inuu ka noqdo dowlada KMG waxaa u magacawday dowlada Xabashida oo ku bixiysey lacag iyo dadaal diblomaasiyadeed intuba. Col. Cabdullahi waa nin aan khibrad siyaasadeed u lahayn nidaamka dowlad dimoqaraadiyad lagu hogaamin karo. Mana aha nin kaligiis go’aan ka gaari karo arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya, waayo wuxuu ka amar qaataa Itoobia oo ku amartay inuu adeegsado siyaasad ku dhisan dirqis, ka dibna u noqoto marmarsiiyo si ay ugu soo duusho dalka.
Korneylku wuxuu adeegsadey dagaaloogayaal kuwa ka mid ah si ay ugu noqdaan buundo uu uga gudbo dhibaatada ka heysata Muqdisho, wuxuuna maamulkiisa uu ku saleeyey qaab ay dagaalooogayaashaas u isticmaali karaan deeqda ay ka helaan aduunka in ay u isticmaalaan qaab ururada aan dowliga ahayn.
Khilaafka Shariifka iyo Korneylku wuxuu ku saleysan yahay sidii ay si siman ugu kala qeybsan lahaayeen deeqda dalka soo gasha oo labaduba ay wakiil ka kala yihiin kooxo iyo dalal shisheeye oo hantidaas doonaya dalaalnimadooda iney qeybtooda ka soo gaarto.
Dadaalkii la isugu keenay Shariifka iyo korneylka wuxuu ku dhamaaday kadib markii korneylku uu u hanjabey Shariifka kuna yiri adigu waxba ma tihid ee markii aan maquuniyo kuwa adiga kaa dambeeya ayaad arkeysaa waxaad tahay. Shariifka ayaa u muuqday ineysan caga jugleyntaas aysan qabow iyo kuleeyl midna ku hayn, wuxuuna go’aansaday inuu isaga baxo shirka. Kadib, markii ay dowlada Yemen oo taageereysa fikrada korneylka ay ku cadaadisey Shariifka inuu korneylka u tanaasulo oo fikradiisa ku raaco. Yemen oo marar badan hubeysay ciidamo beeleed ka soo jeeda gobolka Bari oo sida la ogyahay hub iyo saanadba si joogtaa u soo gaarsiiso ayaanan heshiisiinta labadaas nin ka noqon karin dhex-dhexaad. Burburka heshiiskaas waxey banaanka u soo saartay qorshaha korneylka uu ku doonayo inuu ciidamo uga uruursado degaanada uu ka soo jeedo iyo inuu ku soo duulo Muqdisho. Waxa ay hadda cid waliba sugeysaa inta ay gaarsiisan atahay abaabulka uu korneylku ku diyaarsanayo ciidanka ku soo duulaya Muqdisho iyo inta ay cudud ahaan kaga hortegi kartaan beelaha ciidamadooda ku kulmiyey Muqdisho. Taa waxaa daba socota dagaaloogayaal u haliilaya in ay Muqdisho ku soo celiyaan dagaal qabiil oo ay la galaan korneylka oo dhul fog ka soo duulaya.
Sida la ogsoon yahay ayeysan aheyn ciidamada uu korneylka ku dhaaranayo kuwo tababar ciidan leh, mana aha kuwo tayo leh, ama jirkoodu u adkeysan karo dagaal mudo dheer socon kara.
Ilaa hadda, dowlada Mareykanka ayaa ka soo horjeeda qorshaha dowlada Itoobiya ay ku taageereyso in uu korneylka xoog wax ku maamulo. Waxuuna Mareykanku soo dhoweyay dadaalka ururada bulshada iyo madax dhaqamedyada reer Muqdisho ay ugu jiraan nabadeynta magaalada Xamar. Waxeyna korneylka u soo jeediyeen inuu shacabka Soomaalida ka raadsado ogolaasho iyo kalsooni. Sidoo kale, dowlada Masar iyo Jabuuti ayaa iyaguna uu sheegay dowlada Yemen ineysan burburin dib u heshiisiinta ay dadweynaha Soomaaliyeed ay ka wadaan Muqdisho. Waxeyna u cadeeyeen in waqtigan la joogo aysan suurto gal ahayn in cudud militeri loo adeegsado Muqdisho.